नेपाल आज | ब्याचलरमा विएससी सिएसआइटी पढ्ने सोच छ ? अवैध कलेजबारे चनाखो हुनुहोस् !
कभर स्टोरी देश
काठमाडौं । औसत नेपाली विद्यार्थीहरूको प्लस टुको पढाइ एसइईको नतिजामा भर पर्ने गर्छ । कोही राम्रो अंक आएकै भरमा विज्ञान पढ्छन् त कोही परिवारको करकापमा । कोहीले आफ्नो भविष्य कसरी बनाउनेबारे समयमै निर्णय गरेर विषय छनोट गरेका हुन्छन् । विशेषगरी प्लस २ मा विज्ञान लिएर पढ्नेहरू ब्याचलर लेभलमा गएर दोधारमा पर्छन् । अझै परिवारको करकापकै भरमा विज्ञान पढ्नेहरू त अन्योलमा पर्ने नै भए । मेडिकल र फिजिक्सको क्षेत्रमा मात्र नभएर अहिले विज्ञानका विद्यार्थीहरू विएससी सिएसआइटीतिर पनि लोभिएका छन् । पढ्नुअघि यसबारे विस्तृत ज्ञान लिनु अझ उचित हुन्छ ।
यस्ता छन् यसका विशेषता :
ब्याचलर लेभल विएससी सिएसआइटी भनिने यो ४ वर्षको कोर्समा आठ सेमेस्टर हुन्छ । प्लस टुमा विज्ञान विषय लिएर पास गरेका विद्यार्थीले यो कोर्स पढ्न पाउँछन् ।
त्यसमा पनि सबै विषयमा न्यूनतम ‘सि ग्रेड’ मा पास भएको हुनुपर्छ । अरू विषयमा ए प्लस नै भएर कुनै एकमा ‘सि’ भन्दा तल छ भने पनि यो कोर्स पढ्न पाइँदैन् ।
पढनुपर्ने विषयहरू :
कम्प्युटर विज्ञानका भित्री विषयहरू जस्तै अपरेटिङ सिस्टम, कम्पाइलर, डिजाइन एन्ड एनालाइसिस, थ्योरी अफ कम्पिटेसन, आइटी आदि गरेर ४५–५० वटा विषयहरू यो कोर्समा समावेश हुन्छन् ।
यसमा गणित, स्टाट्टिक्टिस र एउटा फिजिक्स पनि पढ्नुपर्छ । त्यसैगरी म्यानेजमेन्ट र रिपोर्ट राइटिङको एक विषय पनि पढ्नुपर्छ । सातौं सेमेस्टरमा प्रोजेक्ट वर्क र आठौं सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ ।
यो विषय प्रयोग हुने स्थानहरू :
यो पढेपछि यसका जनशक्तिहरू सफ्टवेयर कम्पनीहरूमा, आइटी कम्पनी, बैंक, आइएसपीहरूमा, टेलिभिजनहरूमा, टेलिकमहरूमा, निजामती सेवामा, कलेजमा परिचालन हुन सक्छन् । यसका साथै स्वदेशमा बसेर विदेशी काम गर्न पनि सकिन्छ । विशेषगरी यो प्राविधिक विषय भएकाले जागिरको टाउको नदुखाए हुन्छ । राम्रो विद्यार्थीलाई यसको प्रयोग हुने प्राविधिक संस्थामा तानातान हुन्छ ।
कति छन कलेज ? यो विषयको स्नातकोत्तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को कीर्तिपुरमा मात्रै पढाइ हुन्छ । अन्य विश्वविद्यालयको पनि होला । तर देशभर त्रिविका मात्रै पनि विएससी सिएसआइटी ५० भन्दा बढी कलेज खुलिसकेका छन् ।
यो कोर्स पढाइने कलेज काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३० वटा छन् । लगभग दुई हजार विद्यार्थी छन् यस कोर्सका । पढाउने शिक्षक पनि करिब १ सय ५० जति छन् । दुःखको कुरा, यसको शिक्षक पाउन गाह्रो छ । अर्थात् यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । पढेर जागिर खाने यो पनि राम्रो हो । पाइलटभन्दा कम शिक्षक यो विषयका छन् । सबैजसो कलेजले पार्ट टाइम शिक्षक राखेर काम चलाएका छन् । किनभने फुल टाइम राख्नका लागि शिक्षक पाउन गाह्रो छ ।
आंगिक कलेजहरूमा यो विषय पढ्न केही सस्तो छ । ४ वर्षको २ लाख २० हजारदेखि ४ लाखसम्म खर्च हुन्छ । यो सरदर हो । निजीमा सरदर ८ लाख पर्छ । १५ लाखसम्म असुल्ने नाफाखोरहरू पनि छन् ।
त्रिवि नियमनअनुसार प्रतिवर्ष एक शिक्षकको दरले चार वर्षमा चार शिक्षक र संयोजकसहित पाँच जना पूर्णकालीन हुनुपर्छ । कतिपय कलेजमा संयोजक समेत छैनन् । सबैजसो शिक्षकहरू पार्ट टाइमका छन् ।
चलेका कलेजहरूको पनि हालत खराब छ । कति कलेजहरूको पैसा मात्रै तान्ने नियत देखिन्छ । धेरैजसो कलेजहरूले विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । तर ती कलेजहरू सबै नियम पूरा गरे झैँ गरी विद्यार्थीबाट पैसा असुल गर्छन् ।
केही कलेजहरूले वर्षमा एक एक लाख फि बढाउँछन् । कलेजले त्रिवि सेवा शुल्क पनि दिनुपर्नेे । त्यो शुल्क भने बढाएर त्रिविलाई तिर्दैैनन् । आठ वर्ष अगाडि जति तिरिरहेको छ, त्यही तिर्दै आएका छन् । विद्यार्थीलाई १ लाख बढाउँदा न शिक्षकको तलब बढ्छ न विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क बढाउँछन् । यस्ता शिक्षाका लुटेराहरूको जगजगी भएका कारण विद्यार्थीहरू सजिलै लुटिन्छन् । ४८ विद्यार्थीका हकमा २४ –२४ को सेक्सन हुनुपर्छ । एक सेक्सनमा २४ जनाभन्दा बढी हुन हुँदैन । ‘सेक्सन ब्रेक’ नगरी पनि पढाउनेहरू धेरै छन् ।
नवीकरण नगरी कलेज :
यो क्षेत्रमा कलेज नै नवीकरण नगरी चलाउनेहरू पनि धेरै छन् । नवीकरण नगरी भर्ना नै लिन मिल्दैन । तर पनि उनीहरूले यो गरिरहेका छन् । यसरी चलाउने अवैध कलेजहरू काठमाडौंमा मात्रै पनि करिब २० वटा जति छन् । तर ती कलेजहरूबारे आम विद्यार्थी जानकार छैनन् । त्यस्ता कलेजमा पढ्नु भनेको कुनै पनि बेला समय र पैसा डुबाउनु हो । ती कलेजहरूलाई कुनै पनि बेलामा विश्वविद्यालयले खारेज गरिदिन सक्छ ।
मापदण्डविपरीतका कक्षा कोठा :
कतिपय कलेजहरूमा मापदण्डविपरीतका कक्षा कोठाहरू पनि छन् । विद्यार्थीबाट मोटो भर्ना शुल्क असुल्ने तर न्यून गुणस्तरको सुविधा दिनेहरू धेरै छन् । कलेजहरू जति धेरै हाइफाइ हुन्छन् त्यति नै आन्तरिक रूपमा भ्रष्ट पनि देखिएका छन् । कार्यक्रमका लागि घुस खुवाउने कलेजहरू नै बढी चल्तीमा छन् ।
कार्यक्रम संयोजक बन्नका लागि एमएससी सिएसआइटी गरेको हुनुपर्छ । तर विएससी सिएसआइटी पनि गर्न नसकेकाहरूलाई पनि संयोजक बनाएर केही कलेजहरूले राखेको पाइको छ ।
अरू फयाक्ल्टी पढेकाहरूलाई ल्याएर संयोजक बनाएको पनि पाइन्छ । आट्र्समा स्नातकोत्तर गरेकोलाई साइन्सको संयोजक बनाउने भद्रगोले कलेजहरू धेरै छन् । विद्यार्थीहरूले यस्ता कलेजलाई चिन्न सक्नुपर्छ ।
(सिएसआइटिको विद्यार्थीको लागि विशेष सन्दर्भ सामाग्रीहरु लिएर हामी चाँडै आउँदै छौं ।)
नेपाली विद्यार्थी त्रिवि प्लस टु सिएसआइटी अवैध कलेज
लोचन भट्टराई भन्छिन्, ‘गीत हैन भाषा गाउनु पर्छ’ (भिडियोसहित)
‘गुण्डा हुँदा देश अर्कै थियो, आज गुण्डा मरे देश ध्वस्त भयो’ (भिडियोसहित)
जहाजबाट बादल फाटेको देखेपछि धून फुर्‍यो (भिडियोसहित)